WhatsApp Emojis sy Emoticons misy dikany - EmojisWiki.com
Asa sy Fanatanjahantena
WhatsApp Emojis sy Emoticons misy dikany
Emoticons dia noforonina tamin'ny taona 1990 ary dingana lehibe amin'ny fanovana ny fomba ifandraisan'ny olona amin'ny alàlan'ny media nomerika. Hatramin'ny niandohan'izy ireo dia nanampy tamin'ny fanomezana hevitra tsara kokoa izy ireo ary mamela anao haneho ny fihetseham-ponao na ny fihetseham-ponao amin'ny fomba mivelatra kokoa.
¿Fantatrao ve fa afaka mahita emojis an-jatony ianao amin'ny fitendry nomerika?? Izy ireo dia manolo ho azy ireo marika efa nampiasaina hatry ny ela mba hanehoana ny fomba fiteny sasany toy ny tsiky, fo, na fihomehezana. Ireo dia endrika kely tsy misy fiafarany.
Noho ireo voalaza etsy ambony ireo, ato amin'ity lahatsoratra ity dia misy lisitr'ireo emoticons miaraka amin'ny dikany, ho fantatrao hoe inona ny emojis, inona no fampiasana azy, izay malaza indrindra ary maro hafa.
Lisitry ny emojis sy emoticons misy dikany amin'ny sokajy ho an'ny WhatsApp sy Facebook
WhatsApp sakafo sy zava-pisotro Emojis sy Emoticons misy dikany
Emojis sy Emoticons an'ny WhatsApp Symbols misy dikany
WhatsApp Animal Emojis sy Emoticons misy dikany
WhatsApp Activity sy Sport Emojis ary Emoticons misy dikany
Emojis sy Emoticons amin'ny zavatra WhatsApp misy dikany
WhatsApp Travel and Places Emojis sy Emoticons misy dikany
Inona no atao hoe emoticons na emojis?
Ny emoticons dia mifandray amin'ny endri-tsoratra ampiasaina any amin'ny fanjakana na hafatra elektronika sy sehatra an-tserasera toy ny Instagram, WhatsApp na Facebook izay maneho ny fihetseham-pon'ny olombelona, ​​​​ny faniriany, ny hevitra na ny fihetseham-po amin'ny fomba hafa hita maso.
Araka ny nambarantsika teo am-piandohana japoney ny niaviany ary ny teniny dia nosoratana ho 絵⽂字 izay ahitana ny litera “e” sy ny teny hoe “moji”. Lasa malaza be ireo ka na dia ny akademia sasany aza dia nandray azy ireo ho zava-dehibe tamin'ny fisafidianana ny sasany ho toy ny tenin'ny taona mg 2015.
Shigetaka Kurita no tena namoronana ireo fanehoana hita maso ireo. Noho izany, ireo mpampiasa tamin'izany fotoana izany dia naneho ny toe-javatra rehetra nampiasa azy ireo tamin'ny tarehintsoratra 160 navelan'ny hafatra.
am-boalohany ny emoji dia voafetra amin'ny refy 12 x 12 teboka indrindra noho ny fetran'ny teknolojian'ny sary tamin'izany fotoana izany. Satria tsy iharan'ny zon'ny mpamorona ireo fanehoana an-tsary ireo, maro ireo mpivarotra Japoney no nanararaotra namorona ny sariny manokana.
Noho ireo voalaza etsy ambony ireo, ankehitriny ireo marika ireo dia ampiasaina matetika kokoa ary tena manampy rehefa manoratra hafatra.
Inona no ampiasaina amin'ny WhatsApp sy Facebook?
Ny Emojis dia nampiasaina tamin'ny hafatra an-tsoratra mba hanehoana an-tsary ny fihetseham-po sasany. Na izany aza, noho ny fiovan'ny teknolojia ankehitriny, ahitana hevitra avy amin'ny lohahevitra isan-karazany mba hanondroana toe-javatra tena misy isan-karazany amin'ny fomba tsara indrindra.
Any amin'ny fanjakan'i Whatsapp, Facebook ary Instagram dia tena ilaina, ary koa amin'ny chat rehetra mba hanehoanao fihetseham-po toy ny fifaliana, fahalianana, fanantenana, fitiavana, avonavona, fahatoniana, fankasitrahana, aingam-panahy, avonavona sy ny maro hafa. Izy ireo koa dia manome anao fahafahana haneho fihetseham-po toy ny fahasambarana, fitiavana, fangorahana, gaga, vazivazy, alahelo, hatezerana, sns.
Ohatra amin'ireo voalaza etsy ambony ireo dia azonao ampiasaina ireo endrika miseho eo amin'ny fitendry nomerika mba hanehoana fa malahelo mafy ianao noho ny antony. ihany koa izy ireo dia manamora ny filazanao ny fotoana ifalianao na ny fiovan'ny fihetseham-ponao.
Ireo pictograma ireo dia manampy anao hampihena ny isan'ny teny tianao hambara, toy ny hoe mandeha an-tongotra, miantsena, matory, mihinana sakafo matsiro, sns.
Inona avy ireo emojis na emoticons be mpampiasa indrindra any amin'ny fanjakan'ny Facebook sy WhatsApp?
Eto izahay dia manolotra ny sasany amin'ireo emojis mahazatra indrindra amin'ny sata WhatsApp sy Facebook ary koa ho an'ny Instagram.
Raha mahatsapa fitiavana amin'ny olona ianao, te ho romantika na ho gaga amin'ny hatsaran'ny olona iray na zavatra hafa dia azonao ampiasaina ny emoticon fitiavana. Aseho ny endrika falifaly misy fo roa eo amin'ny maso.
Ny iray amin'ireo marika be mpampiasa indrindra dia ny emoji matahotra na mikiakiaka., endrika gaga izy io izay maneho tahotra na horohoro ary azonao ampiasaina hanehoana fahatsapana na fiantraikany.
Ny emoji mikipitika dia maneho ny iray amin'ireo fomba ratsy indrindra hanehoana amin'ny mpiara-miasa fa tsy maintsy mpiray tsikombakomba amin'ny zavatra ianao na manasa azy ireo amin'ny lalao fotsiny.
Raha te hampita alahelo ianao dia misy endrika mitomany maneho izany mora foana. Fanahiana lalina izany ary afaka manampy anao amin'ny fotoan-tsarotra indrindra.
Ny ankihibe dia ilaina hanondro fifanarahana, fankatoavana na fanekena amin'ny hetsika na hevitra sasany ataon'ny hafa.
Hitanao koa ny emoji na endrika tsy mampino tena ilaina ny mampita ny fisalasalana momba ny hevitra naroson'ny antoko fahatelo. Izy io dia aseho amin'ny endrika tsy mino, miaraka amin'ny hodi-maso milamina.
Ny mari-pamantarana misy ranomasom-pihomehezana na hafaliana dia malaza ihany koa satria manampy anao haneho fahasambarana tafahoatra, fihomehezana na manondro fa tsy afaka mitsahatra ny mihomehy momba ny zavatra iray ianao. Azonao atao ny mamantatra azy mora foana amin'ny tarehiny mitsiky amin'ny rano mitete roa, iray isaky ny maso.
Ny iray amin'ireo pictograms malaza indrindra dia ny endriky ny oroka fo. Izy io dia endrika mandefa oroka ary sary feno fitiavana izay afaka mampifaly na iza na iza.
Ny mpandihy flamenco dia marika mampita ny faniriana handeha amin'ny fety. Azonao ampiasaina tsara izany mba hanondroana fa te handao ny tranonao mandritra ny ora vitsivitsy ianao ary hanana fotoana mahafinaritra.
Nahoana no zava-dehibe ny mahafantatra ny tena dikan'ny emoticons na emojis?
Indraindray ny olona dia mizara ny dikan'ny emojis amin'ny fomba diso, na noho ny tsy fahampian'ny fampahalalam-baovao na noho ny tontolo ara-kolontsaina nanome azy ireo fampiasana hafa nandritra ny fotoana ela, izay nitarika ho amin'ny fananganan'anaka tsy mifandanja.
Ny marina dia manana anarana ofisialy ny emoticon tsirairay io no fiaingana mba hanomezana azy dikany eo amin'ny tontolo ampiasanao azy, satria raha tsy izany dia mety hisy ny tsy fifankahazoan-kevitra ary mety hahasosotra, tsy mahazo aina na mahamenatra mihitsy aza ny tsy fahazoana ny dikan'io endrika kely io.
Ohatra, misy fanehoana sasantsasany mampiseho ny ohabolana sinoa toy ny an'ny gidro telo. Ireo dia midika hoe Aza Mijery Ratsy, Aza Maheno Ratsy, Aza Miteny Ratsy, kanefa ny olona tsirairay dia mampiasa ireo tarehy ireo mba hilazana alahelo, fibanjinana, na fitazonana tsiambaratelo.
Ny mariky ny vehivavy sofina bitro dia mitovy amin'ny filan'ny nofo, fa matetika ny olona no mampiasa ity emoji ity mba hanehoana fahafinaretana, fientanentanana, na fahasambarana mihitsy aza. Izany indrindra amin'ny vondrona namana na namana ary misy tambajotra sosialy toy ny Facebook, Instagram na WhatsApp.
Rehefa miresaka fitarainana, hagagana na tahotra dia matetika ny olona no mampiasa ny emoji amin'ny tarehy amin'ny tanany eo amin'ny takolany. Na izany aza, io marika io dia mifandray amin'ny asan'ny Edvard Munch malaza.
Hitanao ihany koa ny mari-pamantarana maloto, izay miseho ho toy ny gilasy sôkôla mamy indraindray. Ny marina dia izay mifandray amin'ny kolontsaina japoney ny famoronana azy ary maneho vintana tsara.
Araka ny nohazavainay tamin'ireo ohatra teo aloha, ny emoticon tsirairay dia manana dikany manokana, na dia ny ankamaroan'ny olona aza dia manome ny azy manokana. Zava-dehibe hatrany anefa ny fanondroana azy ireo araka ny tokony ho izy mba hisian’ny fifampiresahana bebe kokoa ary tsy ho diso hevitra ny hafatra.
© 2022 EmojisWiki.com · Zo rehetra voatokanaCookies Policy Momba ANAY?